Lorazepam (လိုရာဇီပန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lorazepam (လိုရာဇီပန်)
Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lorazepam (လိုရာဇီပန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lorazepam ကို စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များပြားခြင်းအား ကုသရန် သုံးသည်။ lorazepam သည် benzodiazepine အုပ်စုဝင် ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောများအပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်ခြင်းဖြင့် လူနာကို စိတ်ငြိမ်စေပါသည်။ အဆိုပါဆေးများသည် GABA ဟုခေါ်သော ဓါတ်ပစ္စည်းတမျိုး၏ အာနိသင်ကို ပိုမိုထက်မြက်စေခြင်းဖြင့် ဆေးအာနိသင်ကို ပြစေပါသည်။
အခြားအသုံးပြုမှုများ။ ။ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် အသုံးပြုပုံများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအညွှန်းတွင်မပါဝင်သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ညွန်းဆိုသော အသုံးပြုမှု အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ရောဂါအနေအထား အတွက် lorazepam ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
lorazepam ကို အရက်ဖြတ်ဝေဒနာများ သက်သာရန် ပေးနိုင်သလို ကင်ဆာဆေးများကြောင့် ပျို့အန်ခြင်း နှင့် အိပ်မပျော်ခြင်းများအတွက်လည်း ပေးနိုင်သည်။
Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
lorazepam ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ တနေ့လျင် ၃ကြိမ် သို့မဟုတ် ၄ကြိမ် သို့မဟုတ် သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သောက်နိုင်သည်။ ဆေးပမာဏ အနည်အများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ၊ အသက်အရွယ် နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ဤဆေးသည် ဆေးဖြတ်ခြင်း လက္ခဏာများကို ဖြစ်စေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပုံမှန်သုံးစွဲလျှင် ( ၁ပတ် မှ ၄ပတ် ကျော်အထိ) ၊ပမာဏများပြားစွာ သုံးစွဲလျှင် သို့မဟုတ် သင်သည် အရက်၊မူးယစ်ဆေးစွဲဖူးလျှင် သို့မဟုတ် personality disorder ဟုခေါ်သော စိတ်ရောဂါတမျိုးရှိလျှင် ပိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါအခြေအနေမျိုးတွင် ဆေးကို ရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်ပါက ဆေးဖြတ်ဝေဒနာများဖြစ်သည့် တက်ခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်း၊စိတ်နေစိတ်ထားများ ပြောင်းလဲခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ဗိုက်နာ/အောင့်ခြင်း၊ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ခြေလက်များ ထုံနာကျဉ်နာဖြစ်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊မကြာသေးမီက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ကိစ္စများကို မမှတ်မိတော့ခြင်း၊အဖျားကြီးခြင်း၊ဆူညံသံ၊အထိအတွေ့၊အလင်းစသည်တို့ကို တုန့်ပြန်မှု ပုံမှန်ထက်များလာခြင်း၊ပျို့ခြင်း၊မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း တို့ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။၎င်းဝေဒနာများကို ကာကွယ်ရန် သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ပေးပါလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ ဆေးသောက်ရင်း အဆိုပါ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာပါကလည်း ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပါ။
lorazepam သည် ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို ဆေးစွဲခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အရက် သို့မဟုတ် ဆေးစွဲဖူးသူဖြစ်ပါက lorazepam ကို စွဲရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဆေးပမာဏကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာပါ။lorazepam ကို အချိန်ကြာရှည်စွာ သုံးစွဲပါက ဆေးမတိုးတော့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။ အကယ်၍ နာကျင်ခြင်း မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာခဲ့လျှင် ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပါ။
Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lorazepam ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ lorazepam ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ lorazepam ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Lorazepam ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Lorazepam ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Lorazepam (လိုရာဇီပန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
lorazepam ကို မသောက်သုံးမီ
-အကယ်၍ သင်သည် lorazepam, alprazolam (Xanax),
chlordiazepoxide (Librium, Librax), clonazepam (Klonopin), clorazepate (Tranxene),
diazepam (Valium), estazolam (prosom), flurazepam (Dalmane), oxazepam (Serax),
prazepam (Centrax), temazepam (Restoril), triazolam (Halcion),၊ အခြားသော lorazepam များ သို့မဟုတ် lorazepam ဆေးပြား/ဆေးရည်တို့တွင်ပါဝင်သော အရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။ lorazepam ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေးမြန်းပါ။
antihistamines; digoxin (Lanoxin); levodopa
(Larodopa, Sinemet); စိတ်ကျဝေဒနာ၊တက်ခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းများအတွက် loprazepams , Parkinson’s disease, ပန်းနာရင်ကြပ်၊အအေးမိနှာစေး၊ဓါတ်မတည့်ခြင်းများအတွက် ဆေးများ၊ကြွက်သားပျော့ဆေးများ၊ သန္ဓေတားဆေးများ; probenecid (Benemid); rifampin (Rifadin); အိပ်ဆေး၊စိတ်ငြိမ်ဆေးများ; theophylline (Theo-Dur); valproic acid (Depakene). သို့မှသာ သင့်ဆရာဝန် အနေဖြင့် ဆေးပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
=သင့်တွင် ရေတိမ်ရောဂါ၊အတက်ရောဂါ သို့မဟုတ် အဆုတ်၊အသည်း၊နှလုံးရောဂါများ ရှိနေပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
=ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (အထူးသဖြင့် လ အတော်ရင့်နေလျှင်)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
=သင်သည် အသက် ၆၅နှစ်အထက်ဖြစ်ပါက lorazepam ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များကို သိရှိနိုင်စေရန် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။ အသက်ကြီးသူများတွင် ဆေးပမာဏများလျှင် ပိုမိုအာနိသင်ပြခြင်း မရှိဘဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသာ ပိုလာစေနိုင်သောကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ဆေးပမာဏ နည်းနည်းသာ သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
=သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက lorazepam သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
=lorazepam သည် ငိုက်မျဉ်းစေသဖြင့် ဆေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သေချာစွာ မသိရှိသေးလျှင် ကားမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာအကြီးစားများ မောင်းနှင်ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
=အရက်သည် lorazepam ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
=ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် lorazepam ၏ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်တတ်ပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက lorazepam သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
-စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊စိတ်ကျဝေဒနာ ခံစားရခြင်း၊မိမိကိုယ်ကို နာကျင်အောင်လုပ်လိုသော သတ်သေလိုသော အတွေးများ ပေါ်လာခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Lorazepam (လိုရာဇီပန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lorazepam ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
 A barbiturate such as amobarbital (Amytal), butabarbital (Butisol), mephobarbital
(Mebaral), secobarbital (Seconal), or phenobarbital (Luminal, Solfoton);
 An MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline
(Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), or tranylcypromine (Parnate);
 စိတ်ဝေဒနာများအတွက် အသုံးပြုသော ဆေးများ —–>chlorpromazine (Thorazine),
haloperidol (Haldol), mesoridazine (Serentil), pimozide (Orap), or thioridazine
 Narcotic loprazepams such as butorphanol (Stadol), codeine, hydrocodone (Lortab,
Vicodin), levorphanol (Levo-Dromoran), meperidine (Demerol), methadone
(Dolophine, Methadose), morphine (Kadian, MS Contin, Oramorph), naloxone (Narcan),
oxycodone (oxycontin), propoxyphene (Darvon, Darvocet);
 စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဆေးများ —–>amitriptyline (Elavil, Etrafon), amoxapine (Asendin),
citalopram (Celexa), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin
(Sinequan), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox),
imipramine (Janimine, Tofranil), nortriptyline (Pamelor), paroxetine (Paxil),
protriptyline (Vivactil), sertraline (Zoloft), or trimipramine (Surmontil).
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lorazepam (လိုရာဇီပန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Lorazepam က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lorazepam (လိုရာဇီပန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lorazepam ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
-အိပ်နေရင်း ယာယီ အသက်ရှုရပ်ခြင်း —–> အဆိုပါ လူနာများတွင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
-ကျောက်ကပ်ရောဂါ —–> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
-မပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောဂါ —–> အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်သဖြင့် သတိနှင့် သုံးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
-သွင်းလိုက်ရပ်လိုက် လုပ်ရသော အကြောသွင်းဆေး :
ကနဦးဆေးပမာဏ : ရုတ်တရက် ဂဏှာမငြိမ်ရန်လိုခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ၁ – ၄ မီလီဂရမ်ကို ဆယ်မိနစ်မှ မိနစ်၂၀အတွင်းပေးရမည်။
ဆက်လက်ပေးရမည့်ပမာဏ :လိုအပ်သော စိတ်ငြိမ်ခြင်း အာနိသင်ရရှိစေရန် အတွက် ၁ – ၄ မီလီဂရမ်ကို ၂နာရီခြား တကြိမ်မှ ၆နာရီခြားတကြိမ်အထိ သင့်တော်သလို ပေးရမည်။
-ဆက်တိုက်သွင်းထားရသော အကြောသွင်းဆေး :
လိုအပ်သော စိတ်ငြိမ်ခြင်း အာနိသင်ရရှိစေရန် အတွက် ?? မှ 0.1 mg/kg/hr နှုန်းဖြင့်ပေးရမည်။
ပမာဏ အများအပြားပေးခြင်း (18mg/hr ထက်ပိုသော ပမာဏကို ၄ပတ်ထက် ပိုပေးခြင်း သို့မဟုတ် 25mg/hr ထက်ပိုသော ပမာဏကို နာရီအတော်များများ သို့မဟုတ် ရက် အတော်များများပေးခြင်း)သည် polyethylene glycol နှင့် propylene glycol ပျော်ရည်များကြောင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ သွေးတွင်း lactic acid ပမာဏများပြားခြင်း နှင့် သွေးတွင်းအခဲဓါတ်များပြားခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ကနဦးပမာဏ : ၁မီလီဂရမ်ကို ၂ကြိမ်မှ ၃ကြိမ်အထိ ပေးနိုင်သည်။
ဆက်လက်ပေးရမည့် ဆေးပမာဏ : ၁ – ၂ မီလီဂရမ်ကို ၂ကြိမ်မှ ၃ကြိမ်အထိ ပေးနိုင်သည်။ တနေ့တာအတွက် ပေးရမည့် ဆေးပမာဏသည် ၁ – ၁၀ မီလီဂရမ် အတွင်းဖြစ်သည်။
-အကြောသွင်းဆေး : ကနဦးပမာဏ အဖြစ် ၂မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် 0.044 mg/kg တို့အနက်မှ ပိုနည်းသော ပမာဏကို ပေးရမည်။
-၂ – ၄ မီလီဂရမ်ကို ညအိပ်ချိန်တွင် သောက်ရမည်။
-အသားထိုးဆေး : 0.05 mg/kg ပမာဏဖြင့် အများဆုံး ပမာဏ ၄မီလီဂရမ် အထိပေးနိုင်သည်။
-အကြောသွင်းဆေး : ၂မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် 0.044 mg/kg တို့အနက်မှ ပိုနည်းသော ပမာဏကို ပေးရမည်။
အသက် ၅၀ အထက် လူနာများတွင် အထက်ပါ ပမာဏများထက် မများရပါ။
0.05 mg/kg ပမာဏဖြင့် အများဆုံး ပမာဏ ၄မီလီဂရမ် အထိပေးနိုင်သည်။
-သောက်ဆေးသို့မဟုတ် အကြောသွင်းဆေး : ဝ.၅ – ၂ မီလီဂရမ်ကို ၄နာရီခြားသို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတခါ လိုအပ်သလို ပေးရမည်။
Status Epilepticus အတက်ရောဂါအတွက် : တခါထိုးလျှင် ၄မီလီဂရမ်ကို ၂မိနစ်မှ ၅မိနစ်အတွင်း အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ဖြည်းညင်းစွာ ပေးရမည် (အများဆုံးသွင်းနိုင်သော နှုန်း မှာ တမိနစ်လျှင် ၂မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်)။ လိုအပ်လျှင် နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်မှ ဆယ့်ငါးမိနစ်အတွင်း ထပ်ပေးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၈မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကင်ဆာဆေးကြောင့် ပျို့အန်ခြင်းအတွက် :
အကြောသွင်းဆေး : လေ့လာချက် အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည် (အထူးသဖြင့် အကြိမ်ရေ အများအပြားထိုးခြင်းအတွက်) :
-တစ်ကြိမ်တည်းထိုးလျှင် ကင်ဆာဆေးမသွင်းမီ 0.04 – 0.08 mg/kg/dose နှုန်းဖြင့် အများဆုံး ၄မီလီဂရမ် အထိ ပေးနိုင်ပါသည်။
-အကြိမ်ရေ အများအပြားထိုးလျှင် 0.02 – 0.05 mg/kg/dose နှုန်းကို ခြောက်နာရီခြားတခါ (အများဆုံး ၂ မီလီဂရမ်အထိ) ပေးနိုင်ပါသည်။
ကလေးငယ်များနှင့် ကလေးများ :ပုံမှန်အားဖြင့် 0.05 mg/kg/dose (တခါထိုးလျှင် အများဆုံး ၂ မီလီဂရမ်) ကို လေးနာရီခြားတခါ သို့မဟုတ် ခြောက်နာရီခြားတခါ ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆေးပမာဏ အတိုင်းအဆမှာ 0.02 – 0.1 mg/kg ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ငြိမ်စေရန်အတွက် (ကုသမှု တခုခုမပြုလုပ်မီ) :
ကလေးငယ်များ နှင့် ကလေးများ :
-သောက်ဆေး၊အသားထိုးဆေး သို့မဟုတ် အကြောထိုးဆေး : ပုံမှန်အားဖြင့် 0.05 mg/kg ပေးလေ့ရှိပြီး ဆေးပမာဏ အတိုင်းအဆ 0.02 – 0.09 mg/kg အတွင်း ပေးနိုင်ပါသည်။
-အကြောသွင်းဆေး : အသုံးပြုသော ဆေးပမာဏ ပိုနည်းလေ့ရှိပြီး 0.01 – 0.03 mg/kg ခန့်ပေးလေ့ရှိကာ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခြားတခါ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ပေးလေ့ရှိသည်။
Status Epilepticus အတက်ရောဂါအတွက် :
ကလေးငယ်များနှင့် ကလေးများ :
တခါထိုးလျှင် 0.05 – 0.1 mg/kg (အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ တခါပေးလျှင် ၄ မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်) ကို ၂မိနစ်မှ ၅မိနစ်အတွင်း အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ဖြည်းညင်းစွာ ပေးရမည် (အများဆုံးသွင်းနိုင်သော နှုန်း မှာ တမိနစ်လျှင် ၂မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်)။ လိုအပ်လျှင် နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်မှ ဆယ့်ငါးမိနစ်အတွင်း ထပ်ပေးနိုင်သည်။
တခါထိုးလျှင် 0.07 mg/kg (အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ တခါပေးလျှင် ၄ မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်) ကို ၂မိနစ်မှ ၅မိနစ်အတွင်း အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ဖြည်းညင်းစွာ ပေးရမည် (အများဆုံးသွင်းနိုင်သော နှုန်း မှာ တမိနစ်လျှင် ၂မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်)။ လိုအပ်လျှင် နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်မှ ဆယ့်ငါးမိနစ်အတွင်း ထပ်ပေးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၈မီလီဂရမ် ဖြစ်သည်။
Lorazepam (လိုရာဇီပန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
lorazepam ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
-သောက်ဆေးပြား : ဝ.၅၊ ၁၊ ၂ မီလီဂရမ်။
-အကြောသွင်းဆေး သို့မဟုတ် အသားထိုးဆေးအတွက် ဆေးရည်။
Lorazepam ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Lorazepam (Injection Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/lorazepam-injection-route/description/drg- 20072326. Accessed June, 27, 2016.